FITOKANANA NY TOBY NOMERIKA HO AN’NY VEHIVAVY TAMIN’NY SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB DE MAHAJANGA | Région Boeny
Notokanan’ny Lehiben’ny Faritra Boeny, Atoa Saïd Ahamad Jaffar ny Talata 20 febroary 2018 ny fanavaozana sy fampitaovana ny Ivotoerana iray ao amin’ny Foibem-paritry ny Mponina eto Boeny, ao Mangarivotra Mahajanga. Izy io dia natao ho toby nomerika ho an’ny vehivavy sokajin-taona rehetra, marefo sy sahirana.
Ny ahafahan’izy ireo mianatra sy manampy fahalalana mahakasika ny fikirakirana ny solosaina no tena tanjon’ny Soroptimist International Club de Mahajanga izay tompon-kevitra nanokatra ity ivotoerana ity, ka mandray an-tànana ireo vehivavy ireo.
Ny Orange Solidarité kosa no niantoka ny fanavaozana sy ny fampitaovana ny trano fiofanana. Ankoatra ny fanavaozana ny trano dia Tablettes numériques miisa 10, solosaina finday miisa 04 miaraka amin’ny casque fihainona miisa 14 no natolony araka izany.
Vehivavy miisa 100 no kendrena hofanina amin’izao voalohany izao, ny filamatra entin’ireo tsara-sitrapo roa ireo dia «ny fampianarana sy ny fizakan-tena ho an’ny vehivavy».